Camaloow Online - News: Dawlada kenya ayaa sheegtay in ay duqeeyeen maraakiibteeda dagaalka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose.
20 June 2013 10:36:23 Random Media
Abooto kutubeey jeyte ilkacase kutubey axmed carab Arbaciinu Nawawi - Cumar Faaruuq
· Guests Online: 574
Dawlada kenya ayaa sheegtay in ay duqeeyeen maraakiibteeda dagaalka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in maraakiibteeda dagaalka ay duqeeyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ay ka taliso Xarakada Al-shabaab.
Duqeyntan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay oo maraakiibta dagaalka Kenya ay u geystaan deegaanno ka tirsan Soomaaliya oo ay ka taliso Al-shabaab tan iyo markii dagaalka Koonfurta Somaaliya ku dhexmaraya ciidamada Kenya iyo Al-shabaab uu billowday bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
Ma jirto khasaare illaa hadda lasoo warjiyay oo Al-shabaab kasoo gaartay duqeynta ay maraakiibta dagaalka Kenya ku billaabeen magaalada Kismaayo oo ay awood badan ku leedahay Al-shabaab.
0 Comments · 11471 Reads
10,951,598 unique visits